RFP360: Teknụzụ Na-apụta Nweta Ihe Mgbu Si na RFPs | Martech Zone
RFP360: Teknụzụ Na-apụta Nweta Ihe Mgbu Si na RFPs
Tuesday, October 15, 2019 Monday, October 14, 2019 Beau Wysong kwuru
Ejirila m ọrụ m niile na ngwa ahịa na ịre ahịa sọftụwia. Enwere m nsogbu iji weta ndu na-ekpo ọkụ, mee ka usoro ahịa ahụ dị ngwa, ma merie azụmahịa - nke pụtara na etinyela m ọtụtụ narị awa nke ndụ m na-eche echiche, na-arụ ọrụ na ịzaghachi RFPs - ihe ọjọọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị merie azụmahịa ọhụrụ .
Ndị RFP na-eche mgbe niile dị ka akwụkwọ na-adịghị agwụ agwụ - usoro nwayọ nwayọ nke na-enweghị isi chọrọ ịchụ nta azịza sitere na njikwa ngwaahịa, na-agba esemokwu na iwu, nsogbu nsogbu na IT, yana na-egosi ọnụọgụ na ego. Ndị maara nke ọma maara - ndepụta na-aga n'ihu. Ndị na-azụ ahịa, ọrịre na azụmaahịa mmepe ọkachamara na-etinye ọtụtụ awa na-enweghị ike ịkọwapụta azịza ndị gara aga na ajụjụ ugboro ugboro, na-achụ azịza nke ajụjụ ọhụrụ, na-enyocha ozi ahụ ma na-achọ nkwenye ugboro ugboro. Usoro a dị mgbagwoju anya, na-eri oge yana nsogbu na akụnụba ọ bụla.
N'agbanyeghị mgbanwe ngwa ngwa nke teknụzụ, maka ọtụtụ azụmaahịa, usoro RFP agbanweela obere ihe site na ahụmịhe m na mbido ọrụ m ihe karịrị afọ iri gara aga. Ndị otu ahịa ka na-eji usoro ntuziaka eme ihe iji chịkọta atụmatụ, na-eji azịza sitere na ọnụọgụ ọnụọgụ ọ bụla nwere ike ibi na spreadsheets Excel, kesara akwụkwọ Google na ọbụlagodi ederede email.
Nke ahụ kwuru, ọ bụghị naanị na anyị na-atụsi anya ike ka usoro RFP dịkwuo mma, ụlọ ọrụ ahụ amalitela ịjụ ya, nke bụ ebe ngwanrọ na-apụta iji nwee mmetụta dị egwu na mpaghara RFP.
Uru nke RFP Software
E wezụga ime ka owuwu nke RFP belata ihe mgbu; guzosie ike ngwa ngwa, usoro a na-ekwughachi maka RFPs nwere ike inwe mmetụta kpọmkwem na ego ha ga enweta. Nke a bụ ebe teknụzụ RFP na-apụta.
RFP software na-ekpokọta na katalọgụ ajụjụ na azịza dị n'ọbá akwụkwọ ọdịnaya. Imirikiti ngwọta ndị a bụ igwe ojii na-akwado nkwado oge na-adị n'etiti ndị njikwa atụmatụ, ndị ọkachamara n'okwu gbasara isiokwu na ndị isi njikwa.
Ọ kachasị, RFP360 na-enyere ndị ọrụ aka ngwa ngwa:
Chekwaa, chọta ma jigharịa ọdịnaya site na iji ihe omuma Omenala
Soro ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ rụọ ọrụ n'otu ụdị akwụkwọ ahụ
Ekenye ajụjụ, akara na-aga n'ihu ma na-akpaghị aka ncheta
Wepu nzaghachi na AI nke na-achọpụta ajụjụ ma họrọ azịza ziri ezi
Nweta Isi Ihe Ọmụma ma rụọ ọrụ na amụma dị na Okwu, Excel na Chrome site na iji plug-ins.
N'ihi ya, ndị ọrụ nke a RFP360Nchịkọta njikwa atụmatụ ha ekwuola na ha nwere ike belata oge ngụkọta oge, mee ka ọnụ ọgụgụ ndị RFP ga-enwe ike mezue ma, n'otu oge ahụ, meziwanye mmeri ha n'ogo.
Anyị zaghachiri na 85 pasent karịa RFPs n'afọ a karịa ka anyị mere n'afọ gara aga, anyị wee mee ka ọganihu anyị site na 9 percent.
Erica Clausen-Lee, onye isi ndị isi ọrụ na InfoMart
Site na nzaghachi ngwa ngwa, ị ga-enwe ohere zuru ezu iji wepụta azịza na-agbanwe agbanwe, nke ziri ezi na nke ọma nke nwere ike imeri azụmaahịa ahụ.
Mbo mbuli RFP agbanwe agbanwe
N'iji ihe omuma nke ihe omuma, ndi oru nwere ike ịchekwa, hazie, ichota ma jigharịa ihe omuma ha gara aga, na-enye ha isi mmalite na nzaghachi RFP. Ebe a na-etinye aka na ntinye akwụkwọ na-egbochi ndị otu gị ịmegharị azịza ndị dị ugbu a, na-enye gị ohere ịnakọta data ma debe azịza kachasị mma maka iji ya mee ihe n'ọdịnihu.
Anyị nwere nchebe nke ịmara ihe ọmụma anyị dị mma ma na-agbanwe agbanwe. Anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị na anyị ga-atụfu ọfụma ọ bụla SME ma ọ bụrụ na mmadụ akwụsị ma ọ bụ were ezumike. Anyị anaghị etinye ọtụtụ awa n'ịchọpụta azịza ndị gara aga ma na-anwa ịchọpụta onye na-eme ihe n'ihi na ajụjụ na azịza ya niile dị na RFP360.
Beverly Blakely Jones si National Geographic Mmụta | Ọmụmụ Cengage Case
Melite RFP ziri ezi
Azịza na-ezighi ezi ma ọ bụ oge ochie nwere ike ịbụ aghụghọ iji jide, ọbụlagodi onye otu egwuregwu nwere ahụmịhe. Mgbe ejikọtara ya na ngwa ngwa na-agbanye ọsọ na RFP, ihe ize ndụ nke ịnye ogige ozi ezighi ezi. Na nwute, ozi na-ezighi ezi nwekwara ike bụrụ oke ọnụ na ọ nwere ike ịbe gị azụmaahịa ịchọrọ ịchụso. Nzaghachi RFP na-ezighi ezi nwere ike iduga nchụpụ site na ịtụle, mkparịta ụka ogologo oge, igbu oge na nkwekọrịta ma ọ bụ ka njọ.
Igwe ojii RFP nke igwe ojii na-ekwu banyere nsogbu a site na ikwe ka ndị otu melite nzaghachi ha n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla na obi ike nke ịmara mgbanwe ahụ gosipụtara usoro zuru oke.
Dịka ọmụmaatụ, ụdị ọrụ a bụ nnukwu ngwaọrụ ịnwe mgbe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-enweta mmelite na-agakarị nke kwesịrị itinye na nzaghachi ọkọlọtọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, na-eche ụdị mgbanwe a, ndị otu ga-agafe usoro nhazi niile iji hụ na mmelite na-anabata ụlọ ọrụ wee soro onye ọ bụla soro hụ na emere ya na ọkwa mmadụ n'otu n'otu ma na-enyocha nyocha ọ bụla tupu ha pụọ. Ọ na-agwụ ike.
Igwe ojii RFP nke igwe ojii na-ejikwa mgbanwe ndị a maka azụmaahịa niile ma na-eje ozi dị ka otu ụlọ mkpocha maka ọdịnaya ọdịnaya.
Mee ka RFP dịkwuo mma
Uru kasịnụ nke RFP software bụ otu esi arụ ọrụ ngwa ngwa - n'ụzọ nke ya, oge ọ ga-ewe iji wuo RFP n'iji ụdị teknụzụ a tụnyere ihe dị iche na ịkwọ ụgbọ mmiri gaa n'ụsọ oké osimiri na ife efe. Ọtụtụ ngwanrọ RFP ngwanrọ, gụnyere RFP360, jikwa igwe ojii, nke na-enye ohere maka itinye ngwa ngwa, nke pụtara na nsonaazụ ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Oge ị ga - aba uru (TtV) bụ echiche na enwere elekere nke na - achọpụta oge ole ọ ga - ewe onye ahịa site na nkwekọrịta nkwekọrịta na 'ah-ha oge' mgbe ha ghọtara nke ọma uru ma meghee ikike nke ngwanrọ ahụ. Maka ngwanrọ RFP, oge a na - eme izu ole na ole mgbe abanyela aka nkwekọrịta ahụ mgbe onye ọrụ na - arụ ọrụ na ndị otu ndị ahịa na RFP mbụ ha. A na-ebugo azịza ọkọlọtọ na ntinye nke mbụ na sistemụ ahụ, mgbe ahụ ah-ha oge - sọftụwia ahụ na-amata ajụjụ ma tinye azịza ziri ezi, na-emezue na nkezi 60 ruo 70 pasent nke RFP - n'otu oge.
Anyị chọpụtara na interface RFP360 bụ ihe kachasị nghọta ma dịkwa mfe ibili ma na-agba ọsọ. Enweela usoro mmụta dị ntakịrị ntakịrị maka anyị, ọ na-enyekwa arụmọrụ anyị ohere ịbawanye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Emily Tippins, Onye Nchịkwa Ahịa maka Ndozi Swish | Ileba ọmụmụ
Mgbanwe nke usoro RFP na-enye ndị ọrụ oge iji lekwasị anya na ọkwa dị elu, atụmatụ atumatu.
O doro anya na anyị mere ka anyị rụọ ọrụ nke ọma. RFP360 enyela anyị oge anyị ma nye anyị ohere ịhọrọ ma họrọ ọrụ anyị. Anyị anaghị atụ ụjọ ọzọ. Anyị nwere ike na-miri emi, na-elekwasị anya na-emeri na-eme ka n'aka na anyị na-ahọrọ nri oru na-enye àgwà Ibọrọ.
Brandon Fyffe, onye mmepe azụmaahịa na CareHere
RFP Technology Ga-Haves
Azụmahịa karịrị RFPs - Ngwanrọ azịza abụghị naanị maka RFPs, ị nwekwara ike ijikwa arịrịọ maka ozi (RFIs), nchekwa na ajụjụ nyocha dị mkpa (DDQs), arịrịọ maka iru eru (RFQs) na ndị ọzọ. Enwere ike iji teknụzụ mee ihe maka ụdị ajụjụ na azịza tozuru etozu yana azịza a na-ekwughachi.
Kachasị mma iji klaasị na nkwado - Ọ bụghị onye ọ bụla na-arụ ọrụ na RFPs bụ nnukwu ọrụ. RFPs chọrọ ntinye aka site na ọtụtụ ngalaba na ndị ọkachamara n'okwu gbasara isiokwu nwere ogo ọrụ aka. Họrọ otu usoro dị mfe iji ma kensinammuo site na nkwado ndị ahịa mara mma.
Ahụmahụ na nkwụsi ike - Dịka ọ bụla na-eweta teknụzụ SaaS ọ bụla, ịnwere ike ịtụ anya mmelite na nkwalite oge niile site na teknụzụ RFP gị, mana gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ahụmịhe iji wepụta atụmatụ bara uru nke ị nwere ike ịtụkwasị obi.
ọdọ Àmamihe - Usoro RFP ọ bụla kwesịrị ịgụnye oghere ọdịnaya a na-enyocha nke na-enye ndị ọrụ gị ohere ịmekọrịta ngwa ngwa ma nye mmelite maka nzaghachi enyere ha. Chọọ maka azịza nke na-enye AI ohere iji jụọ ajụjụ ndị nkịtị na azịza ha.
Ntinye nkwụnye ọgụgụ isi na njikọta - Teknụzụ RFP kwesịrị ịrụ ọrụ na mmemme ị na-eji. Chọọ maka nkwụnye ọkụ na-enye gị ohere iji isi ihe ọmụma gị mgbe ị na-arụ ọrụ na nzaghachi gị na mmemme dịka Okwu ma ọ bụ Excel. Sọftụwia ahụ kwesịrị ijikọ na isi CRM na ngwa nrụpụta iji kwado usoro RFP dị ugbu a na enweghị nkwado.
Na-egbusi oge pere mpe ma merie ọtụtụ RFPs
RFPs bụ maka mmeri. Emebere ha iji nyere onye zụrụ ihe aka ikpebi onye kachasị mma, yana ị nwere ike igosipụta na azụmaahịa gị dabara na ụgwọ ahụ, ọ ka mma. RFP software na-eme ka usoro gị dịkwuo ngwa iji mee ka ị tụlee ngwa ngwa, mechie azụmahịa ma nye gị ọbụna ohere ka ị merie.
Dika ndi otu ahia na emeziwanye ihe ma na emekorita ya na oru ha nwetara, oru RFP di nkpa karie usoro a. Ikwu maka nzaghachi RFP ngwa ngwa anaghị aga. Ya mere echela ruo mgbe ị na-enweghị ike ịnara ya ọzọ ịnakwere teknụzụ nke na-azọpụta gị oge na RFPs gị. Ndị na-asọmpi gị agaghị eme ya.
Rịọ RFP360 Demo
Tags: arịrịọ maka amaghịOgboikpo okwu rfpAkpa 360mmezi swishoge iji kpọrọ ihettv
Beau Wysong kwuru
Beau Wysong bu onye isi ndi ahia na RFP360. Ọ na-enyere ya aka ịzụlite azụmaahịa ya na azụmaahịa ya iji bulie azụmaahịa maka ụlọ ọrụ ngwanrọ. Beau nwere ọrụ maka iwulite ahịa na-eduga ahịa, na-etinye ndị ahịa ahịa ma na-azụkwa ndị ahịa n'ọdịnihu ihe ọmụma.
Ihe imara iji bido site na imeghari ndi na-ege nti na Facebook